Aiza Wesley? SXSW fahombiazana amin'ny teti-bola kely | Martech Zone
Asabotsy, Aprily 30, 2016 Zoma, Aprily 29, 2016 Wesley Faulkner
miaraka SXSW tato ho ato aoriantsika, orinasa maro no mipetraka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny manontany tena, Fa maninona no tsy nahazo hery avy tany SXSW izahay? Betsaka aza no manontany tena raha very vola tsotra fotsiny ny vola laniny .. Amin'ny maha-meka ho an'ny orinasa teknolojia azy dia toerana mety indrindra hampahafantarana ny marika iray izy io, fa maninona no orinasa maro no tsy mahomby amin'ity fanangonana teknolojia goavana ity?
Antontan'isa momba ny SXSW Interactive 2016
Mpandray anjara amin'ny Festival Interactive: 37,660 (avy amin'ny firenena vahiny 82)
Fotoam-pivorian'ny Fetiben'ny Interactive: 1377
Mpikabary amin'ny Fetibe ifandraisana: 3,093
Fampahalalam-baovao ifandraisana amin'ny mpanatrika: 3,493
Raha mbola tsy nankany SXSW ianao dia avelao aho handoko sary ho anao. Eritrereto ireo hafatra momba ny spam sy antso an-tarobia rehetra azonao. Omeo vatana vatana tsirairay avy izao. Avy eo apetraho ny tsirairay amin'ireo olona ireo isaky ny zoro sy cranny ao anatiny sy ivelan'ny Austin Convention Center. Betsaka ny mpanosika ny vokatra mora ho an'ny mpanatrika ny manasongadina ny zavatra rehetra.
Ity no toherinay:
Marika efa napetraka izay tonga ao amin'ny SXSW isan-taona, ary ity taona ity no voalohany taminay.
Orinasa manana teti-bola ampy handoavana ny làlana mankany amin'ny fahombiazana, ary araka ny tondroin'ny anarantsika dia mora izahay.
Mijoro amin'ny vahoaka marobe manandrana misongadina.
Mitondra olona mankeny aminao, fa tsy amin'ny lafiny hafa?
Ny ekipa mpivarotra mamorona dia namorona drafitra iray. Toa an'i Frank Underwood, Raha tsy tianao ny fomba fametrahana ny latabatra dia atodiho ny latabatra. Raha tokony hihaza olona, ​​ary hangataka ny hisarika ny saina, dia avelao izy ireo hanatona antsika. Izahay tsy te hanery azy ireo hitady anay, tianay izy ireo te HITADY anay. Teo no nidiran'ny hoe Where's Wesley concept.
Ny drafitra; hanaovako akanjo toa an'i Waldo (na i Wally raha tsy avy any Etazonia ianao)
Omeo tapakila ho an'izay nahafantatra ahy ho mpilalao
Raha naka sary ahy izy ireo ary nampiasa ny diezy #NCSXSW dia hiditra koa izy ireo handresy ny iray amin'ireo Amazon Echos dimy
Herinandro talohan'ny SXSW dia nanoratra lahatsoratra bilaogy iray izahay, ahafahan'ny mpampiasa anay miditra amin'ny fampiroboroboana. Amin'izany no hahafantaran'ny mpanjifanay mahatoky izay tokony hatao mba hahazoana loka azo antoka
Ireo izay tsy namaky ny bilaogy dia mbola afaka mandray anjara raha sendra ahy izy ireo, ary niantso ahy izy ireo
Zava-dehibe ny famakiana ilay saha, fa tsy ny lalao fotsiny.
Nety tsara ilay izy. Nahazo vintana kely akory aza izahay. Andro vitsy talohan'ny nanombohan'ny festival dia nanambara ny tetikasany vaovao i Seth Rogen: hetsika mivantana Aiza ny sarimihetsika Waldo. Ny ekipan'izy ireo marketing dia nanadio ny faritra tamin'ny sticker sticker Where's Waldo. Maty! Ny zavatra tsara hafa nitranga dia ny nandreseko tamin'ny loteria hahita ny filoha Barack Obama. Napetraka tamin'ny rihana voalohany aho tamin'ny faritra tena hita maso. Ireo zavatra roa ireo dia tena nampitombo ny fiparitahanay.
Raha vantany vao fantatray fa manana hafatra tsara izahay dia nohamafisinay tamin'ny Ads.
Ny paikady nanananay dia nanampy bebe kokoa. Izahay dia nividy doka nokendrena tamin'ny sivana toerana ho an'ny faritra Austin amin'ny Facebook sy Twitter. Nataoko izay hamoahana ireo takelaka / fotoam-pivoriana halehako mba hahitan'ny mpampiasa ahy mora kokoa. Nahatonga ahy ho hitan'ny mpanatrika liana tamin'ny haitao tranokala koa izany. Nifindra toerana koa aho - BETSAKA. Izany dia nampitombo ny fahafahan'ny olona mahita ahy. Nataoko izay hahazoana antoka fa handeha any amin'ny antoko ofisialy sy tsy ofisialy maromaro. Ary farany nefa tsy farany, nanao akanjo mitovy aho… REHETRA. Tokan-tena. DAY.
Tena nahafinaritra, fa tena nandreraka. Tsy hanome sosokevitra an'ity karazana fomba marketing ity aho ho an'izay tsy faly miresaka amin'ny olona mety ho sahirana amin'ny fandriana torimaso kely. Saingy, tsara vintana ho ahy, tiako ny mihaona amin'ny olona ary ny zanako kely roa dia nampiofana ahy tamin'ny kanto miasa amin'ny torimaso kely. Singa iray lehibe hafa koa ny naha-talen'ny Media sosialy tao amin'ny Namecheap, Raha tokony tarehy tsara tarehy nifanarahana tamin'ny maso ivoho PR dia afaka niresaka lalina momba ny orinasa sy ny fomba tianay hamorona fifandraisan'ny mpanjifa mahafinaritra. Izany dia namela anay hanorina fifandraisana vaovao ary handray valiny sarobidy momba ny fomba fahitan'ny olona anay orinasa.
Noho ireo antony rehetra voalaza etsy ambony dia fahombiazana tsy voamarina izany, fa ny fijerena ireo isa dia fahombiazana isaina koa. Tao amin'ny Twitter irery no nahazoanay fahatsapana mihoatra ny 4.1 tapitrisa - hatreto ny fampielezan-kevitra ataontsika mahomby indrindra hatreto. Ny vidin'ny fanaovana io fampiroboroboana io dia ambanin'ny $ 5,000.
Tsy ratsy amin'ny SXSW voalohany.
Tsy mbola fantatsika ny fomba hanodinantsika ny latabatra amin'ny taona ho avy, fa mandritra izany fotoana izany dia hiorina amin'ny fampahafantarana marika azontsika izahay tamin'ny SXSW Interactive tamin'ity taona ity.
Tags: 2016barack obamateti-bolafrank underwoodfihaonambe fivarotananamecheapsxswSXSW InteractiveSXSW Interactive 2016aiza i waldoaiza Wesleywordripple
Ny zavatra niainan'i Wesley Faulkner dia mivelatra amin'ny lafiny maro amin'ny indostrian'ny teknolojia, manomboka amin'ny famokarana ka hatramin'ny fampandrosoana ny vokatra. Ny fitiavany ny haitao dia nanjary nandritry ny telo ambin'ny folo taona niainany tamin'ny fanohanana ny tolotra teknika sy ny mpanjifa, ny injenieran'ny sehatra ary ny fampiroboroboana ny haino aman-jery nomerika. Vao tsy ela akory izay dia niditra an-tsehatra tamin'ny sehatry ny media sosialy i Wesley. Izy dia vahiny nasaina nisongadina tamina haino aman-jery web maro toy ny CNET sy Tech amin'ny Twenty. Ampahany amin'ny Tolo-kevitra momba ny haino aman-jery sosialy, ary avy eo amin'ny maha-Evanjelistra momba ny haino aman-jery sosialy azy dia nanampy tamin'ny fampandrosoana ny paikadin'ny media sosialy AMD izy ary nanampy tamin'ny fampidirana fiaraha-miasa vaovao.